Nezvedu - Yongguang Line Equipment Co, Ltd.
HEBEI YONGGUANG LINE EQUIPMENT CO., LTD. ndeyebhizimusi repamusoro rine hunyanzvi hwekugadzira, R & D nekutengesa. Nzvimbo yeYongguang iri mune inozivikanwa "Capital of Electric" muChina-Yongnian, iri pedyo neNational Road Road, Handan airport uye chiteshi chechitima.
Iyo fekitori ine timu yeakasimba ehunyanzvi hwekugona, hwepamberi hwekugadzira, yakakwana yekuongorora michina.
Zvigadzirwa zvedu zvakapfuura bvunzo neECCP's Power Fitting Test Lab. Yemagetsi magetsi indasitiri- Magetsi zvigadzirwa zvemhando yekuedza test uye Xi'an HV Research Institute. Zvigadzirwa zvedu 'yakavimbika mhando uye kuita kwakanaka vakawana mukurumbira wakanaka kubva mukati uye kunze kwenyika musika. Kunze kwezvo, isu takapfuura chetifiketi cheEC, ISO 9001 system, ine chikamu chezvigadzirwa kusvika kune dzimwe nyika dzeEuropean neAmerica dzakasimukira.
Zvigadzirwa zvedu zvakaendeswa kune Asia, Oceania, North America, South America Middle kumabvazuva, Africa etc.
Nekujairika bhizinesi manejimendi, inoshanduka mashandiro ehuratidziro uye yakanakira-yekutengesa basa, kuenderera nekuvandudza, ita kuti kambani yedu ikurumidze kuve imwe yemabhizimusi ekugona uye ehunyanzvi. Iyo kambani inobata pamusoro peiyo ye "mhando hupenyu, mukurumbira uri pasi", ichipa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye basa rinogutsa.
Isu tinogamuchira neushamwari shamwari dzinobva kumativi ese enyika kukurukura bhizinesi uye nekubatana nesu kusimudzira simba pasirese!